Ibhodi yeCharcuterie Entsha elandelayo: Fumana iiBhanana zakho!
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zocingo » Ibhodi yeCharcuterie Entsha elandelayo: Fumana iiBhanana zakho!
I-Flavor & The Menu's Top 10 Trends yonyaka yalatha “kwidemokhrasi yokuveliswa kwezinto ezintsha,” apho ezinye iindlela zokutyela ngoku zikhuthazwa kukuziphatha kwabathengi.
Iibhodi ze-charcuterie ezijikajikayo, iziselo ezifakwe kwibhanana kunye nezimuncumuncu, kunye ne-spins ezintsha kwii-classics zase-Mexico ezithuthuzelayo ziphakathi kwabaphembeleli abaphambili abali-10 abaqhuba imenyu ka-2022, iqikelela iFlavour kunye nemagazini yeMenu kushicilelo lwayo oluphezulu lwe-10 lweTrendi, kwi-intanethi kwi-getflavor.com .
Nyaka ngamnye, iFlavour kunye nabahleli beMenu uCathy Nash Holley kunye noKatie Ayoub baqulunqa iseti yeendlela eziya kuthi zihambelane nabathengi banamhlanje kwaye zibonelele ngamathuba okukhula kwishishini lokutyela. Baqaqambisa iintsingiselo zencasa ezisakhulayo, zinikezela ngezimvo ezikhanyisa “kutheni” ngasemva kwe-10 nganye.
“Lo nyaka ingqokelela yeTop 10 Trends ibonisa utshintsho, apho abathengi abasebatsha babekwizitulo zokuqhuba xa kuthethwa ngokutya nesiselo esikhuthazayo,” utshilo uCathy Nash Holley, Flavour & The Menu’s Publisher/Editor-in-Chief. “Uphando lwethu lubonakalise ukuba amajelo eendaba ezentlalo ahambele phambili ukuya kwinqanaba apho iindlela zokutyela zikhuthazwa kukuziphatha kwabathengi. Oku kubuyela umva nje kwiminyaka embalwa eyadlulayo, xa abasebenzisi bebenxulumana neendawo zokutyela ngemizamo yabo yokwakha uphawu. Uninzi lweendlela ezichazwe kulo mba zibuyela emva kubuchule bobuchule babasebenzisi bemithombo yeendaba zentlalo kunye neempembelelo ezingaphaya. "
UKatie Ayoub, umhleli olawulayo, uchaza lo mcimbi “njengedemokhrasi yokwenza izinto ezintsha.” “Amajelo osasazo eendaba aziwayo namhlanje avumela kwaye akhuthaze abathengi abancinci ukuba babonise ubuchule babo kunye nothando lokutya nesiselo. Ezi ndlela zokuzonwabisa zokuzonwabisa ekhaya-ezifana neebhodi ze-charcuterie, isonka sebhanana kunye ne-pocket-fold quesadillas-zibamba umlilo ngokukhawuleza kule ndawo, ukufumana umfutho kunye nokwakha umdlandla wokuphindaphinda ngakumbi. Abapheki, abapheki bepastry kunye nee-mixologists banokuqala ukusuka apho, besebenzisa inkcubeko entsha ye-pop vibe, emva koko bathathe ezi ncasa kunye neefom kwiindlela ezintsha ezinomdla kwiimenyu zabo, utshilo uAyoub.
I-Flavour kunye ne-Menu's Top 10 Trends ka-2022:
1. I-Charcuterie yeNqanaba Elilandelayo: Ixhaswe yimithombo yeendaba zentlalo, iibhodi ze-charcuterie zaqala ukuphinda ziphinde zibe yinto enokukwabelana ngayo.
2. I-Spanish Bocadillos: I-Spain elula, i-rustic bocadillo ifumana ikhaya kwiimenyu zaseMelika.
3. IsiGrike sanamhlanje: Eschewing the kitschy "Americanized" Greek echaza ukutya kwizizukulwana ngezizukulwana, iirestyu ziseta kwakhona idial kunye neeresiphi kunye nezithako eziyinyani.
4. IiNcasa zeTropiki: Ngemibala ekhuthazayo, izithako ezidlamkileyo kunye ne-island-scape sensibility, i-flavour ye-tropics inika ukubaleka kunye novuyo.
5. Intuthuzelo yaseMexico: I-tweaks yenqanaba elilandelayo lezitya ezinqwenelekayo ezifana ne-quesadillas, i-taquitos kunye ne-birria zibonelela nge-adventure ekhuselekileyo esongelwe kwinduduzo yasekhaya.
6. Ukutya kwaselwandle okusekelwe kwizityalo: Ukutya kwaselwandle okusekelwe kwizityalo kuyaqala ukwenza amaza kwiimenyu, njengoko ababoneleli abavelisa izinto ezintsha bazisa iimveliso ezizezinye kwinkonzo yokutya.
7. Ityuwa: Ityuwa ifumana ukutsaleka njengencasa yencasa kunye nencasa enefuthe eliphezulu iyodwa.
8. I-Savory Hand Pie: Iingqikelelo ezisebenza kwi-hand pie ziye zavuselela ii-injini ezintsha malunga nee-empanadas, ii-meat pie, iipasti, ii-puffs nokunye.
9. Iibhanana: Abaphuhlisi bemenyu banokuxobula umva umaleko onokwenzeka kwibhanana ethobekileyo: ukucofa iithowuni zayo zetropikhi, ungqiyama kubuhle bayo obusemazantsi okanye uphonononge i-eclectic mash-ups.
10. Iziselo zeKofu ezibandayo: Abathengi abancinci baqhuba izinto ezintsha kwiziselo zekofu ezibandayo, beqhuba imenyu entsha yemenyu kuluhlu olubanzi lwezicelo, ukusuka kwiitoni zekofu ezingeyo-alc ukuya kusetyenziso olubanzi kwii-cocktails.
Indlela eNtsha yokuThintela iziPhumo eziMandundu zoNyango loKhuseleko lweCancer
IMarike yabaLawuli bokunkcenkceshela abaNgezizo ezoLimo...
I-Empath Effect yaBantu Abanovelwano Ngokungaphaya kwiNqaqambo...
Umbutho oMtsha wezoKhenketho umiselwe ngokuSekwe kuZinzo...
IMarike yokuTshintshela emva kwesigulana kulindeleke ukuba ifikelele...
Iqonga elitsha elixhasa umnikelo wezintso onokubakho
IMarike yeMichiza yoDisinfectant yoMphezulu ilindelwe...
I-Boeing 757 jet yaphuka phakathi ngexesha laseCosta Rica ...
Ukuthintela Ukunqunyulwa kweSifo seswekile kwiZigulana eziseMngciphekweni omkhulu
Isicelo esitsha seChiza soNyango oluPhezulu lweMigraine
Isithwali seeflegi sasePoland Buyela kwiSibhakabhaka saseIndiya
I-Air Astana yaseKazakhstan irhoxisa zonke iinqwelomoya eziya kunye...
Isakhi soMhlaba esiBalaseleyo seCentral Park
ISkal International iBhiyozela uSuku loMhlaba
Ulwazi olutsha malunga nokuKhohlela okungapheliyo kwi-Idiopathic...
IiFracking Fluids kunye neMarike yeChemical kuKhuphiswano...
Usuku lukaSt Patrick lubuyela kwi-Emerald Isle
Ingxowa-mali yoPhuculo loKhenketho eJamaica Ivula indlela...
Abantu baseCaribbean bazibandakanya no-Airbnb Live and Work Anywhere...
Ezona zixeko zifikelelekayo ehlabathini
Amaqabane avela eTurin aPhumelela amava aMahle eSeychelles
I-WTN iqhwabela izandla iNdlela entsha yeeNkampani zokuHamba ukuba ziyeke...
Amandla okuDanisa adala ubushushu bomzimba, obunokuvuselelwa...
Wazi njani ukuba ungaya nini kwi-ER xa u...
I-Micro-catheter entsha ukuba ifike kwimarike